Ukuze kugcinwe umfanekiso obonakalayo, abafazi basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokutya, ngokulula, ukutya. Ngokuqinisekileyo, ziquka izitya ezilungiselelwe kwimifuno eyahlukileyo. Umgangatho wokutya okunempilo uquka ukusetyenziswa rhoqo kweesobho. Kwintliziyo yeso sipho yile manzi efunekayo ukuze kusebenze ngokuqhelekileyo umzimba womntu. Yonke imithetho ephekiweyo isobho ayinakuyithintela isisu ngeekhalori. Iisobho, ngokukhawuleza zizalise isisu, unike ithuba lamakrikhi ukushiya umzimba. Namhlanje siza kuthetha ngesobho se-anyanisi sokulahleka kwesisindo.
Indlela efanelekileyo yokunciphisa ubunzima, izondlo zibiza isobho se-onion. Isosi elimnandi lihle kakhulu, ngaphezu koko, kunceda ukulahla ubunzima obuninzi. Ukusetyenziswa kwee-anyanisi njengemveliso ezizimeleyo bekude kubekho ingxoxo. I-anyanisi ikhupha umzimba, ikhuthaza ukuvuselela intliziyo neempahla. Kwaye le mifuno ifanisekisa umsebenzi wendlela yokutya kunye nomzimba ngokubanzi.
I-anyanisi yokutya ayinzima kakhulu kubhajethi yentsapho, kuba ixabiso le-anyanisi liphantsi. Isiseko sokutya sisobho se-onion, esiye siphuthuma ukuphuka kwamafutha. Xa ukugaya i-anyanisi, kukho amandla amaninzi. Umzimba ngokukhawuleza ugcwele, kwaye ukusetyenziswa kwee-anyanisi kubangela ukuba umzimba usebenze ixesha elide kwaye unzima. Oku kufikelela kukulula kwenkqubo yamandla enamandla! Ukuba udla isobho se-anyanisi ngosuku, unokongeza inyama encinci kunye nemifuno.
Ukutya kunomdla. Kodwa yena uyedwa kuphela: isobho se-anyanisi sinokukhawuleza satshiswa. Abo bahlala "ngokuhlala" ekudleni kwe-anyanisi, bathi inyaniso yokulahla iipounds ezili-6 ngaphezulu kwiintsuku ezi-7. Mhlawumbi, le miphumo ibalulekile "ukuhlupheka".
Kufuneka kuqatshelwe ukuba isobho se-onion - uncedisi kungekhona kuphela ekugqibeleni ubunzima obuninzi, kodwa kwakhona kuzisa iinzuzo ezinkulu kumzimba womntu. Ngaphandle kokususa iikhilogram ezingaphezulu, iinqanawa ziyacinywa, ukhuseleko luyaqiniswa. Abantu abaninzi abanomdla nje kwiresiphi yesi sidlo, kodwa njani ukupheka isobho se-anyanisi ngokufanelekileyo.
Ukwenza oko, udinga: 1 inhloko yeklabishi, isibini seetamatyiti, ezininzi zeepods zasePulgaria, i-celery encane kunye nama-bulb angama-6.
Yonke imifuno kufuneka inqunywe, uthele amanzi (3 ilitha) kwaye uyifake umlilo, udibanise kwisobho esiphantsi sobushushu kufuneka ulungele. Ukuphucula ukunambitheka kunye nenambatho, unokongeza i-cube, kodwa imifuno kuphela. Ngenxa yoko, uya kufumana umkhiqizo owodwa ozaliswe ngamavithamini.
Ukuze kuphuculwe umphumo wokutya we-anyanisi kunye nesobho se-anyanisi, kufuneka uphuze amanzi amaninzi, ikhofi, itiye, kodwa kuphela ngaphandle kweshukela. Ukuba kukho isobho se-anyanisi sokunciphisa umzimba ngokuphindaphindiweyo amaxesha amathathu, ungafaka iziqhamo ekudleni. Kungaba nayiphi na isiqhamo, kodwa kungekhona iibhanana. Ngosuku lwesibini lokutya, unokongeza ekutyeni nayiphi na imifuno, ngaphandle kweetatata. Ngosuku lwesithathu lokutya, ungadla imifuno, kodwa i-stew kuphela. Ngomhla wesine: unako ukusela isilazi yobisi (i-fat-fat). Ngomhla wesihlanu, ziphatheka kwiqhekeza yenkomo kunye nesaladi. Kwaye ngomhla wesithandathu, unokongeza kwisobho se-anyanisi inkukhu encinci, intlanzi. Iintlobo ngalolu suku alukhuthazwa. Usuku lokugqibela: ungadla isobho se-anyanisi, imifuno enomsila omnyama kunye nejusi, okukhethwa ngokutsha.
Ukutya akubandakanyi ukusetyenziswa kwamnandi, umgubo, amafutha, ukutya okuthosiweyo. Awukwazi ukusela utywala. Ayikho nayiphi na ifomu. Ukuba zonke iimfuno ezingentla zigcinwe ngenyameko, ngoko umphumo uya kudlula zonke izinto ezilindeleke. Abantu abaninzi, emva kokuzama ukutya oku kanye, bavame ukuphinda. Zama nawe. Uza kunciphisa ubunzima kunye nempilo!
Ukupheka imifuno, ungalahlekelwa yivithamini
Imibhiyozo yomtshato ngaphandle
Izakhiwo ezifanelekileyo zokutya i-gelatin
UVera Brezhnev ukhankanywe kwi-frank photo shoot shot kumagazini waseUkraine
Isidlo sokutya ngokugcwalisa ukhilimu
Indlela yokuthintela ukulahlekelwa kweenwele ezinamandla
Ikhefu elikhawulezayo kwi-oven microwave
Indlela yokukhetha nokulungisa ii-mussels?
Ubuhlungu kwizihlanganisi zezandla kunye neenyawo ngexesha lokukhulelwa
Iibhasikiti kunye nekhilimu kunye ne-cherry
I-Panini kunye nenkukhu kunye nentsimbi yepilisi